Ungayikhuphela njani iVidiyo kwiTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyikhuphele njani ividiyo kwi-twitter?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 265
Inethiwekhi yoluntu ngokugqwesa yi-twitterkuba, yenye yezona zilula ukuzisebenzisa kunye nokusasazeka okukhawulezayo.
Iitweets ezahlukeneyo ezifumanekayo kwi-twitter zinolwazi olungapheliyo. Ukusuka kwiindaba, ipodcast, iividiyo, imifanekiso okanye i-mini-post, ngokuthe ngqo nangokulula kwiitweets. Nangona kunjalo, ukuze ube nakho ukusebenzisa ulwazi oluqulethwe kuzo, kunyanzelekile ukuba ube unxibelelwano lwe-intanethi olwaneleyo.
Ke, ngokungabikho konxibelelwano lwe-intanethi, ungonwabela olunye ulwazi oludingayo kwaye lubanjwe kwi-tweet. Ngokukodwa ividiyo. Ke unokuzikhuphela kwaye ugcine kuyo nayiphi na inkumbulo.
Sifanele senze ntoni ukufumana iividiyo esizifunayo?
Ekuqaleni, kufuneka sifumane kwaye sikhethe ividiyo esifuna ukuyikhuphela. Nje ukuba sikhethwe kufuneka silandele le miyalelo ilandelayo:
Khuphela ikhonkco lephepha apho i-tweet kunye nevidiyo: Sithatha eli khonkco okanye i-URL kwinkqubo elandelayo.
Khetha iwebhu ukukhuphela ividiyo: Kukho iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Phakathi kwezona zaziwayo sinokuthiya ngegama downloadtwittervideo.com okanye twdown.net. La maphepha asebenza ngokufanelekileyo ukukhuphela iividiyo kwi-twitter kwaye inkqubo ilula.
Cola ikhonkco kwibar yomsebenzi: Emva kokwenza oku, kufuneka ucofe i icon yokukhuphela. Emva koko, uya kuba nakho ukubona i-pop-up tab, eya kukuvumela ukuba ukhethe iziphumo zevidiyo.
Khetha isisombululo sevidiyo: Ezi zigqibo zinokwahluka ngokwesisombululo esinye sevidiyo. Ukuba isisombululo somthombo sikwinkcazo ephezulu, unokufumana olu khetho kwisisombululo sokukhuphela.
Nje ukuba ukhetho lokhetho lukhethwe, oku kuzakuqala kwangoko.
Ezi nkqubo zinokwahluka xa usebenzisa isixhobo esiphathwayo, esiSelfowuni okanye iThebhulethi.
Kule meko unokulandela le miyalelo ilandelayo:
Kwimeko yokuqala, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uza kuyikhuphela ividiyo kwiqonga lewebhu okanye usetyenziso. Sebenzisa iqonga, inkqubo iyafana kakhulu nale ichazwe apha ngasentla. Itshintsha nje indlela yokukhupha ikhonkco.
Ikhonkco okanye i-URL yetwitter Uya kuyifumana kwi icon emise okwe-v kwicandelo lasekunene le-tweet.
Khetha usetyenziso oza kulusebenzisa: Kukho ezinye izicelo kwivenkile yesicelo simahla kwaye ezinye zinobunini. Ezona zaziwayo yi-snaptube, Isikhupheli simahla se-Android okanye isiKhupheli se-AVD.
Naziphi na kwezi zicelo ziya kukuvumela ukhuphele ividiyo ngokulandela inkqubo efanayo.
Unamathisela ikhonkco levidiyo ekhutshwe kwi-tweet Kwibar yomsebenzi yesicelo, kamva, ucinezela i icon yokukhuphela okanye unike umthwalo xa usetyenziso lungesiNgesi.
Emva koko ukhetho lwevidiyo luya kuvela, ukusuka kwinkcazo ephezulu ukuya kwisisombululo esisezantsi. Ngokubanzi, iividiyo zikhutshelwa kwifomathi ye-MP4, kwaye kunokubakho ezinye, ezinje nge-AVI okanye iMKV.
Nje ukuba isisombululo sikhethwe, kuya kuvela injini yokukhangela eya kukuvumela ukuba ukhethe ifolda apho ividiyo iya kugcinwa khona.
1 Sifanele senze ntoni ukufumana iividiyo esizifunayo?
2 Kule meko unokulandela le miyalelo ilandelayo:
Ungawajonga njani amaqela kwiTelegram?
Ukukhuphela iividiyo kuFacebook